रगत पाउन ‘डोनर’ कै भर- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
‘बी’, ‘एबी’ तथा नेगेटिभ समूहको रगत ब्लड बैंकमा पनि कमै संकलन हुन्छ । यस्तोमा बिरामीलाई आवश्यक परे रक्तदाता खोज्नुको विकल्प छैन । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाले यसमा झनै सास्ती थपिदिएको छ ।
असार ७, २०७८ प्रशान्त माली
काठमाडौँ — दुवै मिर्गौला खराब भएका नुवाकोटका ५ वर्षीय असीम घलेको शरीरमा रगतको मात्रा बढ्न सकिरहेको छैन । उनलाई प्रत्येक तीन सातामा दुई पिन्ट रगत चढाउनुपर्छ । पाटन अस्पतालमा सातामा दुई पटक डायलसिस गराउँदै आएका छन् ।
ललितपुरको पाटनमा पटुको डट कम र पटुको टोल सुधार समितिले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको रक्तदान शिविर । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर
उनका बुबा हिल्लराजले रक्तसञ्चार केन्द्र (ब्लड बैंक) मा रगत खोज्नै छोडिसकेका छन्, कारण रगत पाउन निकै मुस्किल पर्छ ।
केही समययता उनले निजी अस्पतालमा रक्तदाता (डोनर) लगेर रक्तदान गराएर छोरालाई चाहिने रगतको पूर्ति गर्दै आएका छन् । असिमको ६ महिनाअघि मिर्गौला खराब भएको हो । त्यसयता हिल्लराजको दैनिकी ‘एबी पोजिटिभ’ रक्त समूहका व्यक्तिको खोजीमा बित्ने गरेको छ । डोनर जम्मा पार्न उनले निकै हन्डर खाइसकेका छन् । डोनर नपाएर दुई पटक त आफैं पनि रगत दिइसकेका छन् । भन्छन्, ‘सधैं आफैंले दिन पनि नमिल्ने, कोरोनाका कारण साथीभाइ, आफन्त सबै गाउँमा छन् । सहरमा चिनेजानेका कम छन् । सातामा एक पटक रगत र किड्नी जाँच गराउनुपर्छ । समयमा रगत चढाउन नसके बच्चाले खाना नखाने र सुन्निने गर्छ ।’
छोरासँग मिल्दो रक्त समूह भएका व्यक्ति नपाउँदा उनी गाउँ फर्कन चाहन्छन् । गाउँमा डोनर छन्, नुवाकोट अस्पतालमा हालै मात्र डायलसिस मेसिन पनि जोडिएको छ तर छोराको प्रत्येक साता गराउनुपर्ने जाँचको व्यवस्था नहुँदा उनी काठमाडौंमै बस्न बाध्य छन् । ‘छोरालाई दिनुपर्ने १४/१५ थरी औषधि राजधानीमै पनि पाउन मुस्किल छ । गाउँमा झन् सम्भव छैन,’ उनले भने ।
स्याङ्जाका २० वर्षीय नाजिल राणाले डायलसिस गराउँदै आएको तीन वर्ष भयो । उनको रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम छ । मासिक दुई पटक रगत चढाउनुपर्छ । कोरोना महामारी फैलिएयता उनले पनि रगत पाउन निकै सकस झेल्दै आएको बताए । रक्तसञ्चार केन्द्रहरूले रगत अभाव छ भन्दै फर्काउने गरेकाले पछिल्लो समय आफूले पनि सम्पर्क गर्न छोडेको उनले सुनाए । अहिले डोनरकै भर रहे पनि उनलाई रक्त समूह मिल्ने व्यक्ति खोज्न हम्मे परेको छ ।
१८ वर्षीय रञ्जन आचार्यको समस्या पनि उस्तै छ । समयमा रगत चढाउन नसक्दा शरीर सुन्निएको अवस्थामा आचार्य पाटन अस्पतालमा भेटिए । उनलाई प्रत्येक १५ दिनमा दुई पिन्ट रगत दिनुपर्छ । उनी डोनर खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बालाजु बस्ने उनको ब्लड ग्रुप ‘ओ पोजिटिभ’ हो । ५ वर्षदेखि डायलसिस गराउँदै आएका उनले लकडाउनले रगत अभाव हुँदा निकै सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । रगत अभावले समस्यामा परेका यी केही प्रतिनिधि मिर्गौलापीडित मात्रै हुन् । धोबीघाटका भरत थापाको आकस्मिक डायलसिस गराउनुपर्‍यो । तर रगत अभावका कारण तीन दिनपछि मात्र गराए । छोरी शर्मिला भन्छिन्, ‘रगत पाउन निषेधाज्ञाले मात्र नभई रक्तसञ्चार केन्द्रको नीतिले पनि समस्या निम्तिएको हो । पहिला रक्तदान गरेपछि कार्ड दिन्थ्यो । त्यही कार्डबाट रगत पाउन सहज हुन्थ्यो । त्यतिबेला नचाहनेहरूले पनि रक्तदान गर्थे । कार्ड सिस्टम हटेयता रक्तदान गर्नेको संख्या घट्यो ।’
सामान्यतया डायलसिस ३० वर्ष उमेर पुगेकालाई सातामा दुई पटक, वृद्धवृद्धालाई तीन पटकसम्म गराउनुपर्छ । यस्ता बिरामीलाई प्रत्येक दुई सातामा रगत चढाउनुपर्छ । त्यसो नभए शरीरमा विभिन्न समस्या थपिन्छन् । विभिन्न रक्त समूहमध्ये ‘ओ’ र ‘ए’ सहज रूपमा पाउन सकिन्छ । ‘बी’ र ‘एबी’ कम मात्रामा पाइन्छ । नेगेटिभ रगत झनै कम पाइन्छ । यस्ता बिरामी यो बेला अझ मर्कामा छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रका अनुसार पोजिटिभ र नेगेटिभ गरी रगत ८ थरीका हुन्छन् । मुलुकमा ए, ओ र बी समूहका ९० प्रतिशत र एबी समूहका १० प्रतिशत रक्तदाता छन् । केन्द्रसम्म आउने एबी समूह भएकामध्येमा ३ प्रतिशतमा मात्रै नेगेटिभ समूहको रगत हुने निर्देशक दिव्यराज पौडेलले बताए । यसकारण नै डोनरको आवश्यकता पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पनि डोनर कार्ड दिने व्यवस्था छ । तर कार्ड सिस्टम मुलुकभर लागू गर्न सक्ने सम्भावना कम भएकाले हटाइएको हो । त्यसमाथि पहिला आउनेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले पनि यो व्यवस्था हटायौं । तैपनि यसको विकल्प सोचिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार निषेधाज्ञा, मनसुन सक्रिय भई खोलानाला बढ्दा र खेतीपातीको काम सुरु भएकाले पनि देशभर रक्तदान शिविर कम आयोजना भइरहेको छ । अहिले मुस्किलले ४० प्रतिशत रगत मात्रै शिविरबाट संकलन भइरहेको छ ।
संकलित रगतमध्ये एक तिहाइ मात्रै प्रयोग
संकलन भइरहेको रगत पनि उचित भण्डारणको अभाव र रक्तदान प्रक्रियामै सावधानी नअपनाइँदा नालीमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । यसबारेमा सम्बन्धित निकाय जानकार भए पनि व्यवस्थापनमा खासै चासो देखाएको पाइँदैन । संकलित रगतमध्ये हाल ३०–३५ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आउने गरेको नेपाल स्वयंसेवी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘हामी डोनरलाई हारगुहार गरी धेरै दुःख खप्दै रक्तदान शिविर आयोजना गर्छौं तर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत सम्बन्धित निकायको लापरबाहीका कारण संकलित रगतमध्ये आधा पनि प्रयोगमा आउँदैन ।’
उनका अनुसार अस्पतालले चाहिनेभन्दा बढी रगत माग गर्ने गर्छन् । ‘बिरामीलाई प्रयोगमा नआएको रगत पनि फर्काउन चासो दिँदैनन् । बिरामीका आफन्तले पनि प्रयोग नभए रगत फर्काउँदैनन्,’ उनले भने, ‘रेडक्रस सोसाइटीमा राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले समस्या देखिएको हो । यसले रक्तदाताले दुःख गरेर पठाएको रगतको मूल्यांकन भएन ।’
राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति २०७१ मा बिरामीले रगत निःशुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर रेडक्रस र अस्पतालहरूले रगत दिएबापत चर्को मूल्य लिने गरेको आरोप नयाँ होइन ।
अहिले रेडक्रसले एक पिन्ट रगतको ४ सय ९५ र निजी अस्पतालहरूले २ हजार २ सयदेखि २ हजार ४ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका कर्माचार्य बताउँछन् । रेडक्रस निर्देशक पौडेलले भने रगत खेर जान नदिन अस्पताल प्रशासन र बिरामीका आफन्तलाई फर्काउन अनुरोध गर्ने गरेको दाबी गरे । ‘परीक्षणबाट रिजेक्ट भएका, निश्चित आयु भएका, अस्पतालले व्यवस्थापनमा चासो नदिएको रगत मात्र खेर जाने हो,’ उनले भने, ‘खेर जाने रगत अत्यन्त न्यून छ ।’
बिरामीका आफन्तले पनि लगेको रगत अस्पतालमा प्रयोग भए/नभएको बारेमा जानकारी नलिने गरेको उनको आरोप छ । ‘मापदण्डमा प्रयोग नभएको रगत फर्काउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । अनुगमनका लागि स्वास्थ्य विभागसँग पनि सहकार्य गर्न माग गरेको छु,’ उनले भने ।
प्रकाशित : असार ७, २०७८ १०:२५
संस्कृतिविद् जोशी घर फर्किए
असार ४, २०७८ प्रशान्त माली
काठमाडौँ — वरिष्ठ संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी अस्पतालमा एघार दिनको उपचारपछि शुक्रबार घर फर्केका छन् । उनी पाटन बखुम्बहालस्थित निवासमा बस्छन् ।
जेठ २६ गते ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनी ललितपुरको इमाडोलस्थित किष्ट शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका थिए । उपचारका क्रममा उनमा छातीको संक्रमण, मुटुको चालमा गढबडीका साथै रक्तचापमा कमी देखिएको थियो ।
अहिले रक्तचापलगायतमा देखिएको गडबडी नियन्त्रणमा आइ हिँडडुल गर्नसक्ने भएपछि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले डिस्चार्ज गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनको उपचारमा प्रा.डा. मिलेशजंग सिजापतिको नेतृत्वको कार्डीयोलोजिस्ट तथा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञको ५ जनाको टोली खटिएका थिए ।
छाती रोग विशषेज्ञ प्रा.डा. सिजापतिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएर साबिक सरह खानपिन हिँडडुल गर्न थालेकाले मुटुको औषधि दिएर डिस्चार्ज गरेको बताए । ‘उनी प्रेसर, सुगर, दमजस्ता रोगबाट मुक्त छन्,’ उनले भने, ‘नियमित व्यायाम, खानपिनमा ध्यान दिएकै कारणले स्वास्थ्य राम्रो भएको देखिन्छ ।’
जोशीको पीसीआर परीक्षणमा गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । तैपनि निमोनियाको संक्रमण देखिएकाले सुरुमा एन्टिबायोटिक चलाइएको थियो । अब जोशीलाई एक सातापछि फलोअपका लागि चिकित्सकको टोलीले सम्पर्क गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालले २०७६ मा समाजमा पुर्‍याएको योगदान कदर गर्दै उनी र उनकी धर्मपत्नीको सम्मान स्वरुप नि:शुल्क स्वास्थोपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अस्पतालबाट शुक्रबार घर फर्कने क्रममा संस्कृतिविद् जोशी ।
विगत ८ महिनादेखि जोशीको निवासमा प्रत्येक महिना चिकित्सकको टोली पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्दै आइरहेको छ । त्यसक्रममा गत जेठ २६ गते जोशीले ज्वारो र श्वास फेर्न गाह्रो भएको बताएपछि अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो ।
जोशी गत वैशाख ३० गते १०२ वर्षमा प्रवेश गरेका थिए । जोशीका भतिज ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अजरमान जोशीले आराम गर्नुपर्ने भएकाले केहीदिन फोन वा भेटघाटमा नआउन विभिन्न संघसंस्था तथा मिडियाकर्मीलाई अनुरोध गरेका छन् । ‘डिस्चार्ज भएकै दिनदेखि विभिन्न विषयवस्तुबारे बुझ्नुपर्ने भनी तारन्तर फोन आइरहेको छ,’ उनले भने ।
तीनपटक मदन पुरस्कार प्राप्त जोशी दम्पतीले गत वर्ष मरणोपरान्त आफ्नो शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका थिए । जोशीको मुहार अंकित रु १० को हुलाक टिकट र उनको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक टक्सार महाशाखाबाट तस्बिर अंकित चाँदीको सिक्का निष्कासन गरिएको छ ।
प्रकाशित : असार ४, २०७८ १८:५९